Jurgen Klopp oo ku niyad jabiyay jamaahiirta kooxda Liverpool go’aankan layaabka leh – Gool FM
(Liverpool) 31 Luulyo 2018. Warbaahinta ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Talaado ah go’aamada qaar ee macalinka kooxda Liverpool Jürgen Klopp gaar ahaan maalmaha yar ee ka harsan suuqan xagaaga.
Wargeyska Daily Mail ee dalka Endland ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Jürgen Klopp uu doonayo in suuqan xagaaga uu kaga soo xirto saxiixii uu sameeyay ee ahaa goolhaayaha reer Brazil Alisson Becker. Kaasoo uu kula soo wareegay aduun dhan 62 million euros.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in jamaahiir fara badan ay riyadooda ahayd in Jürgen Klopp uu sameyn doono saxiixa kubad sameeyo aad u wanaagsan si uu u noqdo badalka Philippe Coutinho.
Philippe Coutinho ayaa kaga biiray kooxda Reds suuqa bishii January ee lasoo dhaafay dhigeeda Barcelona uu haatan ka tirsan yahay.
Liverpool ayaa ku guuldareesatay ilaa iyo haatan raacdadii ay ugu jireen saxiixa Nabil Fekir, si uu ugu noqdo badalka laacibka reer Brazil.
Macalinka reer Germany ayaa lagu soo waramayaa in bilawga suuqan xagaaga uu xiiseenayay inuu sameeyo saxiixa xidig si ku wanaagsan khadka dhexe.
Jürgen Klopp ayaa durbadiiba u dhaqaaqay inuu sameeyo saxiixa xidiga kooxda Lyon ee Nabil Fekir, laakiin natiijada baaritaanka caafimaad ayaa keentay in Liverpool ay ka baxdo heshiiska.
Si kastaba kooxda ayaa go’aansatay ka dib markii ay ku guul darreysatay saxiixa Nabil Fekir, inay ku kalsoonaato Naby Keïta, si uu ugu maamulo khdkeeda dhexe laga bilaabo xili ciyaareedka cusub.
Muxuu ka yiri Jose Mourinho macalinka kooxda Chelsea Maurizio Sarri?